Malunga nathi -I-Beijing Convista Flow Control Equipment Co, Ltd
I-CONVISTA izinikele kuphando kunye nokubonelela ngazo zonke iintlobo zezixhobo zolawulo lokuhamba njengoku Ivaluva, ukusebenza kweValve kunye nokuLawula, Iimpompo kunye nezinye izinto ezinxulumene noko kunye nezinto ezinje Iintsika neZilinganisi, Izihluzi kunye neefilitha, Amalungu, iiMitha zokuHamba, Izikhumba, Ekubunjweni & nasekuqiniseni izinto njl.
I-CONVISTA ngumthengisi ophambili wamazwe aphesheya Ivaluva, Umsebenzi weValve & Ulawulo, Iimpompo kunye nezinto ezinxulumene nazo kwezi ndawo zilandelayo zesicelo
Ulwelo olundlongondlongo noludubulayo
Amanzi acocekileyo okanye angcolileyo
Ulwelo olonakalisayo nolubonakalayo
Imixube yolwelo / eqinileyo kunye nesilayidi
I-CONVISTA ixhasa iinjongo zeProtocol yaseKyoto kwaye ibeka ixabiso elikhulu ekusebenzeni kakuhle kwamandla kuzo zonke iimveliso kunye neetekhnoloji. Ukongeza, iinkqubo zethu zomsebenzi kunye nokusingqongileyo kokusebenza kuyilelwe ukuba kufuneke amandla amancinci kwaye njengezinto ezimbalwa ezinqabileyo ezinokubakho.
Ukuba ngowona mthengisi uthembekileyo wezixhobo zolawulo lokuhamba kwabasebenzisi behlabathi
Ingcali ekhuselekileyo, yokonga umbane kunye nokusingqongileyo enobuchule bokulawula isisombululo
Soloko unyanzelisa abathengi ukuba banikezele ngokunyaniseka, ngokungqongqo, ngobungcali nangempumelelo
Soloko uhambelana nokuphicothwa ngokungqongqo kwabathengisi, ngenjongo yokusebenzisana kunye nokuphumelela kunye
Soloko unyanzelisa ukuhlakulela iqela elinetalente ngentshiseko, umceli mngeni kunye nothando
Umqeshwa sisiseko sethu kunye nomxholo. I-Convista ixhomekeke kumqeshwa wethu-aba bantu benza ixabiso le-Convista, balandele ukhuseleko lwentsebenzo yemveliso kunye nokuthembeka, kunye nesidima, ukunyaniseka, kunye nokuhlonipha ixabiso lomntu ngamnye, imihla ngemihla. Umqeshwa lilitye eliza neConvista, kwangaxeshanye, uConvista naye uzinikele ekwenzeni nganye yezi mpumelelo. Utyalomali lweConvista kwitekhnoloji yamva nje, inkqubo kunye nezixhobo zolawulo zenza ukuba umntu ngamnye adlale iitalente zabo ngokuzolileyo.
Umsebenzi woKhuseleko, uMqeshwa osempilweni
IConvista idiniwe ukuqinisekisa ukuba indawo yomsebenzi ikhuselekile kwaye isempilweni. Siyaqhubeka nokuphucula unyaka nonyaka kule nkalo. Sibeka phambili ukhuseleko lwabasebenzi kwinkcubeko yombutho wethu, sisebenza kunye nomqeshwa kwindawo ekhuselekileyo nenempilo, sijonga ukukhuseleka kunye nempilo kuwo wonke umsebenzi wethu, ngokusekwe kuloo nto, sisebenza ngokuqhubekayo kwaye siqinisekisa ukuba siyaqonda kwaye sinoxanduva lokuphatha umngcipheko.
Simisela kwaye siphuhlise inkqubo yokhuseleko kunye nempilo, indawo yokhuseleko elungileyo, izixhobo kunye novavanyo lwempilo rhoqo konke kuqinisekisa indawo yokusebenza ekhuselekileyo neyempilo yabasebenzi. Inkqubo yeConvista esekwe yempilo yokhuseleko kunye nenkqubo yolawulo, inkqubo yolawulo lokusingqongileyo, ijolise ekunikezeleni umqeshwa wethu indawo yokusebenza ekhuselekileyo.
Uqeqesho lwaBasebenzi noPhuhliso ukukhuthaza nokuxhasa abasebenzi ukumba amandla alo
Sisoloko sizibophelela ekunikeni indawo epheleleyo kwiitalente kwaye siyisebenzise kakuhle yonke into. Senza isicwangciso somqeshwa ngamnye sophuhliso lomsebenzi esisekwe kwimeko yabo. Sibonelela ngoqeqesho kwizakhono kubasebenzi abasebenza ngaphambili, kwaye sinikezela ngoqeqesho kulawulo, sinikezela ngezifundo zemfundo enomsila kubasebenzi bezobuchwephesha njlnjl. Zonke ezi zinto zinceda abasebenzi ngamnye ukukhula okupheleleyo ngexesha elifutshane.
Abasebenzi baqondwa kwaye bayanconywa
Unyaka nonyaka sivavanya ezona zakhono zibalaseleyo zomsebenzi kunye nomsebenzi ophambili wabaphambili njengobuchwephesha, kwaye sibonelele
Ibhonasi nganye nganye ngenyanga kunye nonyaka. Ngaphezulu, sikwavavanya umgangatho ophakamileyo womntu ngamnye kwaye
izixhobo zigcina umntu ngamnye kwaye zibonelela ngebhonasi kubo.
Isilogeni sethu esivelayo sisisiqalo seshishini kunye, sabelane ngeziqhamo.
Sicinga ukuba, uConvista ufana nosapho kunenkampani, umqeshwa wethu ngamalungu osapho, isebenza ngexabiso elifanayo kunye nenjongo yeshishini. Dibana nexabiso labasebenzi, ixabiso leqela elidibeneyo kunye nokwenza igumbi eliphuhlisayo kunye nelokukhuthaza abasebenzi. Umqeshwa emi nequmrhu kwaye wabelana ngeziqhamo zokuqala.
Unyaka ngamnye uConvista ubhiyozela uMnyhadala weNtlakohlaza, ukubulela igalelo lelungu ngalinye.